Ny orinasa miorina ao an-tanàna mavitrika indrindra ao amin'ny faritra Azia-Pasifika, Shanghai. Ny vokatra rehetra avy amin'ny famolavolana, misokatra bobongolo, santionany, famokarana, frosted, afa-tsy ny hafanana avo loko sy ny multicolor fanontam-pirinty, gilt (volafotsy) nohitsakitsahiko, sary hoso-doko, mivory mba hanatratrarana iray-mijanona fanaterana fanompoana. Ny vokatry ny fifidianana fitaovana, avy amin'ny akora, sakafo, mpandrendrika rafitra, namorona, annealing, fanodinana, fizahan-toetra, famonosana sy ny famokarana ireo dingana vita eo ambany kalitao ISO90002 rafitra.
BEST amin'ny fonosana, tsy isika ihany no lehibe indrindra fifantenana na aiza na aiza ny fitaratra sy ny fonosana plastika mandrakariva fa karena ny vokatra isan-karazany. Amin'ny alalan'ny fanakambanana manam-pahaizana mpanjifa 'fanompoana amin'ny valiny avy hatrany, dia manana ny orinasa ara-barotra iraisam-pirenena manokana ao Shanghai koa. Manana traikefa betsaka amin'ny fanaraha-maso ny kalitao,-barotra iraisam-pirenena, fanondranana, fitaovana, ka azo ny masonao sy ny salohim-bary eny Shina mba hahazoana antoka ianao famatsiana vokatra tsara amin'ny vidiny tsara indrindra, ny fohy indrindra nitarika ny fotoana.
Ny asany dia ny:
● Omeo fanavaozana fonosana Vahaolana
● Meet na mihoatra ny mpanjifa zavatra ilaina sy ny zavatra andrasana
● Omeo ambony toetra amin'ny mpanjifa-natao fonosana
● Ara-potoana fanaterana
● isika fa nanantena fifanampiana mivoatra sy ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny mpanjifa manerana izao tontolo izao